Kuthetha ukuthini ukuphupha Ukhozi? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuphupha ngokhozi lelinye lamaphupha avusa umdla wokufuna ukwazi, yinto eqhelekileyo. Ngokubanzi, eli phupha lithetha ukuba impumelelo isendleleni yakho kwaye yonke into iya kuxhomekeka kuwe kuphela.
Eyona nto iphambili kukubaleka emva kweenjongo kwaye kule into wenze kakuhle kakhulu, uyifezekisile into oyifunayo. Nangona kunjalo, kukho ingxaki kwaye kukungxama, ngoko ke kubalulekile ukuba unikele ingqalelo kuloo nto.
Ukuze ukwazi ukufikelela kuzo zonke iinjongo zakho, funda le ngxelo ngenyameko. Ukuphupha ngokhozi kulungile ebomini bakho, thatha oku kutolikwa njengengcebiso.
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha ukhozi?
2 Iphupha lokhozi olubhabha
3 Iphupha lokubona ukhozi
4 Iphupha malunga nokufika koKhozi
5 Ukuphupha ukhozi luwele encotsheni yentaba
6 Ukuphupha ngokhozi luqwenga ixhoba
7 Ukuphupha uhlaselwa ngokhozi
8 Iphupha lokuba ukhozi
9 Phupha ukhozi olufileyo
10 Ngaba iphupha ngokwalo lilungile okanye libi?
Iphupha ngalinye lihlala lineentsingiselo ezibhekisa ngaphakathi kwethu, oko kukuthi, amaphupha asizisela iingcebiso okanye imiyalezo. Ngale ndlela, ukuzazi kunokuphakanyiswa kwaye kuphuculwe ngoncedo lwamaphupha.
Ukuba ufuna ukwazi intsingiselo yokuphupha ngokhozi, kuya kufuneka ujonge ngaphakathi kuwe. Emva koko zama ukuthathela ingqalelo iinkcukacha eziphambili ezikhoyo kumaphupha akho ukunceda ekutolikeni.
Iphupha lokhozi olubhabha
Impumelelo isondele kakhulu kwaye uyifumene apho uyifumana khona, kuba ungumntu oyilungiselelayo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uqonde ukuba ukhozi lumele wena kunye nobomi bakho. Ke, ingcebiso kukuqhubeka uye phambili kwaye ungayeki ukukhangela into oyifunayo.
Zonke iintaka xa zifunda ukubhabha zinobunzima, musa ukuhlehlisa ukuba kufuneka zizame ukufika apho zifuna khona, akukho mntu uzalwa esazi.
Iphupha lokubona ukhozi
Ngochwephesha nangokusondeleyo uqhuba kakuhle kakhulu, kodwa awukahambi njengoko ufuna. Ke kuya kufuneka ufumane iimpazamo ezenziweyo kwaye uzisombulule.
Ke yonke into iyavakala, eli iya kuba lixesha lokufuna ulwazi kunye nokuzigxeka. Le ndlela yokuziphatha eyiyo iya kukwenza uphucule iindlela zakho, ufezekise impumelelo ngokulula.
Ukuphupha ukhozi kuthetha ukuba uyakwazi ukufikelela apho ufuna ukuya khona, kodwa kufuneka uhlengahlengise izinto ezimbalwa ezincinci ukuze zibelula.
Iphupha malunga nokufika koKhozi
Owona mqondiso ucacileyo wokuphupha kumisa kokhozi kukuba ayonto intle ukwenza phantsi koxinzelelo. Oku akuyi kuba yinto elungileyo kuphuhliso lwakho kwaye kunokubangela umngcipheko ekufuneka uthintelwe.
Xa sisebenza siphantsi koxinzelelo sincama iziphumo zethu: ukungxama lutshaba lokugqibelela. Gcina ukhumbula ukuba ufuna ukuzola ukuze yonke into isebenze.
Yenza yonke into kancinci kancinci kwaye uphephe abantu abakukhawulezisayo ukufikelela kwiinjongo zakho. Ukhozi luhlala ngexesha lalo kwaye kufuneka lube njalo nasemsebenzini walo.
Ukuphupha ukhozi luwele encotsheni yentaba
Owona mqondiso uxhaphakileyo kweli phupha kukuba uyakufumana isiphithiphithi emsebenzini. Ngaphambi kokuba uphume unxunguphele, khumbula ukuba uzolile.
Asitsho ukuba uza kuphulukana nomsebenzi wakho, kodwa mhlawumbi ezinye iziganeko ziya kwenza usuku lwakho lomsebenzi lube nzima ngakumbi. Yiba noxolo kwaye uvumele ikamva libekho ebomini bakho.
Ukhozi lomelele kwaye aloyiki umoya, ngoko ke kufuneka ukuba lube malunga nobunzima bobomi.
Ukuphupha ngokhozi luqwenga ixhoba
Ubuntu bakho bomelele kakhulu, kodwa kufuneka ube nomonde ungafuni ukuhlasela nabani na. Yiba nobulungisa, kodwa ungakhathali, iimfazwe zinokubangela iingxaki ezinkulu kuwe.
Zama ukwenza ngobuchule kwaye kusenokwenzeka ukuba ngexesha elifutshane yonke into iya kuphucula nangakumbi kuwe. Kwakhona, zama ukuba nexesha lokudibana kunye nokulungelelanisa ubuntu bakho obomeleleyo nolawulo lweemvakalelo zakho.
Sukuthatha izigqibo ngokunyanzelwa, thetha ngokuzolileyo kwaye ulumkele iimpembelelo ezinobundlongondlongo; Oku kunokuwutshabalalisa umsebenzi wakho.
Ukuphupha uhlaselwa ngokhozi
Ubunzima buya kuba yinxalenye yobomi bakho kwaye kubalulekile ukuba ube nomonde wokuwela kukungakhathali okungunaphakade. Iindaba ezimnandi zezokuba ngokungadimazeki, kulula ukuqhubela phambili kwaye uhlala ufuna iziphumo ezintsha.
Njengokuba kwenzeka izinto ezimbi, izinto ezintle ziyinxalenye yobomi bakho. Qhubeka usilwa, xa ucinga ukuba konke kulahlekile, kungekudala uza kufumana izinto ezintsha.
Iphupha lokuba ukhozi
Isiqinisekiso siqinisekile, kuba ukuphupha ukhozi ngelixa uyi-bug kubonisa ukuba kukho ukhuseleko oluninzi. Ungumntu ozithembileyo kwaye uyazi kakuhle into ekufuneka uyenzile ukufezekisa iinjongo zakho. Umbuzo omkhulu kukuba ngamanye amaxesha umbono wokuyila awunakubonakala kwaye kuya kufuneka uvumele yonke into ukuba ihambe.
Musa ukuwela kwimfano, iinkozi zizilwanyana ezomeleleyo nezisoyikisayo, ukoyikisa ukhuphiswano lwakho kufuneka uthathe ikhulu leesimo sengqondo esitsha kwabanye abantu.
Phupha ukhozi olufileyo
Owona mqondiso uqhelekileyo kweli phupha kukuba kufuneka usoloko ucinga kabini ngaphambi kokuba ube nasiphi na isimo sengqondo. Iinjongo zakho kufuneka zize kuqala, ke soloko ucinga ngeziphumo.
Musa ukuchitha ixesha lakho ngezinto ezililize okanye ezinokukufaka engxakini, iinkozi zizilwanyana ezinqabileyo kwaye ukuba zifile kungenxa yokuba benze impazamo.
Ngaba iphupha ngokwalo lilungile okanye libi?
Ukuphupha ngokhozi ngokubanzi kuyinto elungileyo. Iphupha eli lithetha lukhulu malunga nempumelelo nangamathuba akho okufezekisa onke amaphupha akho. Wulumkele umlomo wakho kunye nobundlongondlongo bakho, kungenjalo konke okunye kubonakala ngathi kuphantsi kolawulo.
Iphupha likulethele izinto ezintle, camngca ngalo kwaye ungalahli ingqalelo, kungenjalo impumelelo yakho iya kuthatha ixesha elide ukufikelela kuwe.